ओमिक्रोनले सङ्क्रमित गराउँदा शरीरमा देखिन्छन् यी लक्षणहरू, थप जानौं | Hamro Doctor News
नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा कोरोनाको तेस्रो चरणको लहर सुरु भइसकेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण अहिले अमेरिका, बेलायत, भारत, नेपालसहितका मुलुकमा तेस्रो चरणको लहर सुरु भइसकेको छ । जसका कारण मानिसहरू सङ्क्रमित हुने क्रम तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ ।
विश्वभर दिनकै १८ देखि २२ लाखका दरले सङ्क्रमित थपिँदै गर्दा नेपालमा पनि सङ्क्रमित थपिनेदर झन्डै ७ हजार पुगिसकेको छ । सरकारले गत चैतमा दैनिक सङ्क्रमित ५ सय नाघेपछि नै दोस्रो लहर घोषणा गरिसकेको थियो । तर, हाल ७ हजार दैनिक सङ्क्रमित पुगेपनि सरकारले यसलाई औपचारिक रुपमा तेस्रो चरणको लहर घोषणा गरेको छैन ।
कोरोनाको ओमिक्रोनले गर्दा नै सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको हुँदा यसबाट जोगिन र आवश्यक सावधानी अपनाउन सरकारले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छ । यसले एक पटकमा ३ जना र ३ जनाले १२ जनालाई सङ्क्रमित बनाउने हुँदा सङ्क्रमण दरले तीव्रता पाएको सरकारको भनाइ छ । तर, हाल देखिएको कोरोनाको ओमिक्रोनका कारण समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिसकेको अनुमान गरिएपनि यसको ठोस पुष्टिका लागि जित सिक्वेन्सिङ पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन ।
हालसम्म कोरोनाको जतिपनि भेरिएन्ट फेला परेका छन् त्यसमध्ये ओमिक्रोनले सङ्क्रमण छिटो गराउने भएकाले पनि ओमिक्रोनकै कारणले सङ्क्रमण दर बढेको बुझ्न सकिन्छ ।
ओमिक्रोनको बारेमा अझै थप अध्ययन हुन बाँकी नै छ । तर, हालसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने यसले मृत्यु गराउने जोखिम कम देखिएको छ । जसको प्रमुख कारणमध्येको एक हो कोरोनाविरुद्धको खोप । कोरोनाविरुद्धको खोपका कारण पनि मृत्यु गराउने जोखिम कम हुँदा र यसको जोखिम पनि कम रहेकाले थोरै राहत भने महसुस गर्न सकिन्छ ।
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टले सङ्क्रमित बनाउँदा कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् र यो शरीरमा कति दिनसम्म रहन्छ ? भन्ने पनि पछिल्लो समय मानिसको मनमा उब्जेको प्रश्न हो ।
यसअघि देखिएका भेरिएन्टले मानिसलाई थला पार्ने, छातीमा सिधै आक्रमण गर्ने, निमोनिया गराउने गरेका थिए । तर, ओमिक्रोनमा त्यति धेरै गम्भीरता ल्याउने अवस्था हालसम्मको अध्ययनमा नदेखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा.जनक कोइरालाका अनुसार पनि ओमिक्रोनका कारण निमोनिया गराउने सम्भावना न्यून देखिएको र यसले मानिसलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउने सम्भावना पनि कम रहेकाले अन्य भेरिएन्ट जस्ताको चिन्ताको विषय छैन । तर, यसको अर्थ कोरोनाले केही हुँदैन र गराउँदैन भनेर सोच्नु हुँदैन ।
उनी भन्छन्, ‘हालसम्म पनि नेपालमा सबै लक्षित समूहले पूर्ण मात्रा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसकेका छैनन् । त्यसकारण पनि जोखिम हुने भएकाले सबैले सावधानी र सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।’
कोरोनाको ओमिक्रोन भेरिएन्टमा देखिने २० लक्षणबारे जानौंः
थकाई महसुस हुने
निरन्तर खोकी लागि रहने
चिसो लाग्ने वा काप्ने
आवाज धोद्रो हुने
सुगन्ध परिवर्तन हुने
छालामा र्यासेज आउने
ब्रेन फग अर्थात् असहज महसुस हुने
कति समय शरीरमा रहन्छ ओमिक्रोको सङ्क्रमण ?
डा.कोइरालाका अनुसार ओमिक्रोनको लक्षण डेल्टाको तुलनामा तीव्र गतिमा फैलिएपनि शरीरमा भने थोरै समय रहने गरेको छ । ओमिक्रोनको इनक्यूवेशन पिरियड कम हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
ओमिक्रोनका कारण सङ्क्रमित भएकाहरूमा २ देखि ५ दिनपछि लक्षण देखिन सक्छ । सामान्यतया रुघाखोकी जस्ता लक्षण ओमिक्रोनको हुन्छ । जुन औसतमा ५ दिनसम्म शरीरमा रहन्छ ।
के ओमिक्रोनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ ?
बेलायतको इपिडिमियोलोजी केन्द्रका अनुसार ओमिक्रोनले हालसम्म बिरामीलाई गम्भीर अवस्थाको लक्षण देखा परेको छैन । साथै ओमिक्रोनले निको हुनेहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई पनि राम्रो बनाइरहेको छ ।
युनिभर्सिटी अफ ईस्ट एन्जेलियाको इन्फेक्सियस डिजिज विज्ञ प्राध्यापक पल हन्टरका अनुसार ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भइसकेपछि निको भएकाहरूमा राम्रो इम्यूनिटि विकास भएको पाइएको छ । जुन हालसम्म देखिएका भेरिएन्टको तुलनामा राम्रो र सकारात्मक हो ।
इम्पेरियल कलेज अफ लण्डनका अनुसार सामान्य रुघाखोकीले पनि शरीरमा कोरोनासँग लड्नका लागि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार सामान्य खोकी र हाच्छ्यूँले टी सेल्सलाई बढाउँछ । यसले शरीरमा विभिन्न प्रकारका भाइरसलाई पहिचान गर्ने क्षमता बढाउने काम गर्छ ।
Last modified on 2022-01-18 13:25:18